Roast Lamb Leg | Colourful Recipes
← Grilled rib eye steak
Strawberry Pattern Swiss Roll →
with baked potatoes
1 Lamb Leg
Make several small incisions into the leg and insert the garlic slices. Rub Leg with oil and sprinkle with herbs. Season with salt and pepper.
Place Lamb into roasting pan.
Preheat oven to 425ºF roast for 15 minutes.
Lower oven to 375ºF and continue roasting for 20min/pound of meat
until the pop-up timer activates which will occur when the meat reaches an internal 155ºF.
Let meat stand, covered, for 10 minutes before carving.
သိုးသား တစ်ပေါင် 4.99 ဒေါ်လာ
သံပုရာသီး ညစ်ပီး တစ်နာရီလောက် ခဏ သိုးသားကို ညီနံပျောက်သွားအောင် သံပုရာရည်ဖြစ်ဖြစ်၊ ရှာလကာရည်ဖြစ်ဖြစ် စိမ်ထားပီးမှ ရေသေချာ ပြန်ဆေးချပါ။
ဓါးပြားရိုက် ကြက်သွန်ဖြူ ၅ မွှာ
သံလွင်ဆီ ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း
( dried thyme ) စမုန်ဖြူ အခြောက် ထမင်းစားဇွန်း – ၂ ဇွန်း
( dried rosemary ) ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင် ရိုစ့်မေရီ – ထမင်းစားဇွန်း – ၂ ဇွန်း
ဆား – ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း
သံပုရာ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – ထမင်းစားဇွန်း – ၂ ဇွန်း
ဗနီကာ အနီ – ထမင်းစားဇွန်း – ၁ ဇွန်း
ထောပတ် – အနည်းငယ်
အားလူး – ၂ လုံး
သိုးပေါင်ကို ဓါးပြားရိုက် ကြက်သွန်ဖြူ၊ သံလွင်ဆီ၊ စမုန်ဖြူ၊ rosemary၊ ဆား၊ သံပုရာ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ဗနီကာ အနီ တို့ဖြင့် နှံစပ်နေအောင် နှယ်ပါ။
ပလပ်စတစ်အိတ်ထဲ ထည့်ပြီး တညလောက် ရေခဲသေတာထဲမှာ ထည့်နှပ်ထားနိုင်လျှင် ပိုကောင်းပါသည်။
မနက်ကျမှ သိုးသားမကင်ခင် ရေခဲသေတာထဲမှာ နာရီဝက်၊ ၁၅ မိနစ်လောက် ကြိုထုတ်ထားပြီး
oven tray ထဲ ထည့်ပါ။
Preheat oven –
425ºF – Roast – 15 Minutes
375ºF – ၂၀ မိနစ် / တစ်ပေါင် ( အခု သိုးပေါင်က 5.9lb = ၆ပေါင် နီးပါးလောက် ရှိတာမို့ – ၂ နာရီလောက် ကင်ရပါမယ်။ )
375ºF – 1 hours ( 60 minutes )
သိုးသားကို oven tray မှ ထုတ်ပြီး တဖက် သိုးပေါင် ဘက်ခြမ်းကို လှန်ပြီး oven rack ( အလယ်စင် ) ပေါ်မှာ ထားလိုက်ပါ။
သိုးသားကို ထောပတ် အနည်းငယ် သုပ်ပေးပါက ထောပတ် သိုးသားကင် အနံမွှေးမွှေးလေးဖြင့် ပိုစားကောင်းသည်။
oven tray ထဲမှ ဆော့စ်များကို ပန်းကန်လုံးထဲ ထည့်ထားပါ။
အောက်မှာ oven tray ထဲ အားလူးကို အတုံးသေးသေးစိတ်ပြီး ကင်ပါ။
200ºF – 10 minutes
၁၀ မိနစ်လောက် အအေးခံပြီးရင် လှီးစားလို့ ရပါပြီ။
သိုးသားကင်ကို ခရမ်းချဉ်သီး ငံပြာရည်ချက် ထမင်းနှယ်ထားသော ထမင်းဖြင့် တွဲစားပါတယ်။
By Thet Nandar • Posted in Lamb - Roast, Lamb Recipe, Price - Meat, Prices	• Tagged dinner, food, garlic cloves, lamb leg roast, red wine vinegar, roast leg of lamb